शिशिर भण्डारीको बाईक दुर्टघʼ नाको दृश्य खिच्दा हेर्नेको भिड । ‘भोली हामी भेट्छौ’ गीत खिʼच्दा हेर्नुʼस यस्तो भयो (भिडिʼयो हेर्नुस) – Ap Nepal
शिशिर भण्डारीको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । कुशल सञ्चारकर्मी एवम् सामाजिक अभियन्ता शिशिर भण्डारीले ‘भोली हामी भेट्छौँ’ बोलको गीत बजारमा ल्याएका छन् । परदेशी जिवनको मार्मिक कथामा रहेको गीतमा सुजाता केसी र शिशिरको स्वर रहेको छ ।
शब्द संगीत अभिनय उनि आफैले गरेका हुन भने गीतमा गरिमा शर्मा,सुजाता केसी,गणेश केसी लक्ष्मण अभिकारीको अभिनय देख्न सकिन्छ । ज्ञानेद्र शर्मा हुमागाईं को छायाकंन मा रहेको गीत दिन्सन शाहले सम्पादन गरेका हुन भने शिशिर आफ्नै निर्देशन रहेको छ ।
समाजमा दुखी गरिब अशायको शाहाराको रुपमा अफुलाई समाजमा चिनाउन मन पराउने सञ्चारकर्मी, हाकलाकार एवम् गायक संगीतकार हुन् । शिशिर भण्डारी । पहिलो गीत हाम्रो माया जिन्दावाद दर्शको माया साथ पाएका उनले दुइ दिनको जिन्दगीमा, फोटो फिरिममा लगाएत अपार सफलता हात पारेका उनले धेरै गीतमा अभिनय समेत गरिसकेका छन् ।
गीतको छायाँकन यसरी गरियो..हेर्नुस तलको भिडियोमा..
Prevभारतीय न्यूज च्यानल `जी न्यूज` र प्रधानमन्त्रीलाई रवी लामिछानेको कडा स्टाटस !
Nextएटिएमबाट पैसा झिक्दै हुनुन्छ ? आज माघ १ गतेदेखि बन्यो यस्तो नियम
जग्गा धितोमा बैंकबाट ऋण नपाइने, कित्ताकाट पनि रोकियो..
अमेरिकाको डीभी पर्दा पनि अमेरिका नगई देशको सेवामा गर्दै सेनामा भर्ती..